Fitodika mpandray - Wikipedia
Ny fitodika mpandray dia fitodika asahon'ny endriky ny matoanteny ao amin'ny fehezanteny izay ahitana lazaina manondro ny olona na zavatra na toerana iantefan'ny zavatra atolotra na alefa. Ny lazaina amin'ny fehezanteny mitodika amin'ny mpandray dia mitana ny anjara asa fameno zoina faharoa ao amin'ny fehezanteny mañano.
1.1 Ny fitodika mpandray araka ny haiteny araka anjara asa
1.2 Ny fitodika zoina tanty sy fitodika zoina tolorana araka ny haiteny ara-piofohana
Amin'ny fiteny malagasy dia matoanteny aman-tovana -ana ny matoantenin'ny mpandray.
Omen'ny Fanjakana fanampiana ireo vahoaka sahirana (mpandray) / Manome fanampiana ireo vahoaka sahirana ny Fanjakana (mpanao).
Ny hoe ny vahoaka sahitrana ao amin'ny fehezeanteny voalohany dia "lazaina mpandray", fa ao amin'ny fehezanteny faharoa dia "fameno mpandray". Ny matoanteny hoe omena (ome-ana) dia "matoantenin'ny mpandray", fa ny hoe manome (man-ome) dia "matoantenin'ny mpanao". Marihina fa manavaka ny "fameno zoina tolorana" sy ny "fameno zoina tanty" (ary ny "fameno zoina toerana") ny haiteny ara-piofohana malagasy.
Ny fitodika mpandray araka ny haiteny araka anjara asa[hanova | hanova ny fango]
Araka ny haiteny araka anjara asa dia mitodika amin'ny lazaina mpandray ny fehezanteny raha mivany telo fara-fahakeliny (ahitana entimilaza sy renifameno ary lazaina), mitana anjara asa mpandray ny teny atao lazaina, ary ahitana matoanteny aman-tovana -ana. Misy koa ny matoantenin'ny mpandray aman-tsirinteny sara-droa (a- ... -ana, aha- ...-ana, sns) afaka soloana matoantenin'ny mpandray aman-tovana -ana.
Ny fitodika zoina tanty sy fitodika zoina tolorana araka ny haiteny ara-piofohana[hanova | hanova ny fango]
Manavaka ny "fitodika zoina tanty" sy ny "fitodika zoina tolorana", izay tsy sarahan'ny haiteny araka anjara asa fa mifangaro ao amin'ny "fitodika mpandray", ny haiteny ara-piofohana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitodika_mpandray&oldid=977092"
Voaova farany tamin'ny 18 Novambra 2019 amin'ny 09:41 ity pejy ity.